“Maxaa u sabab ah in Lamaanayaal Jacayl Sanado badan soo jilaayay, marka ay is guur-sadaan .....
Loading...	Home Maqaallo “Maxaa u sabab ah in Lamaanayaal Jacayl Sanado badan soo jilaayay, marka ay is guur-sadaan .....
“Maxaa u sabab ah in Lamaanayaal Jacayl Sanado badan soo jilaayay, marka ay is guur-sadaan .....	Tuesday, 27 April 2010 23:38	administrator	Akhriste AHMED HASSAN (AX-DHEERE) EX XAMAR-BILLE oo ka mid ah akhi-yaarta, waxgaradka & waayo-araga sida joogtada ugu xiran Webka GEESGUUD.COM oo sida uu ku soo xusay qoraal habeysan oo Kumbi-yuutar uu u soo adeegsaday si joogto ah ula soc-day dooddan & doodihii ka horeeyayba, balse middan nasiibka u helay inuu fikraddiisa ku soo bandhigo ayaa qoraalkiisa ku bilaabay:-
“Dooddan burburka Qoyska waxaan qabaa inay u sabab tahay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin:-
1. Guud ahaan jahli bulshada ka heysta dhaqanka aqoonta & ku dhaqanka diinta Islaamka & weliba aqoonta maadiga ahba.
2. Is doorashada hore oo aan Jacaylka laga run sheegin.
3. Sal-fudeyd Dumarka u badan & samir-darro ragga qaar ka timaada.
4. Faragelin u badan inay ka timaado xagga waalidka, gaar ahaan soddohda aan fiicneyn.
5. Kuu sheekeeye, kaa sheekeeye oo lala sheekeysto, sida la hubo “sheeg sheeg Aadane uurkaaga ayuu sheydaamo dhigaa”.
6. Gudniinka fircooniga ah oo aan la sahlan kar-in dhibaatadiisa, kaalin mug lehna ka geysta burburka Qoyska oo aan ka shiiqin Qaadka.
Ugu dambeyntii Mowduucan & mid ka horeeyay ee u dhexeeyay “Gabdhaha & Garoobada” oo ahayd dood gabdhaha kaliya ku koobneyd, balse ragga in laga qeyb geliyo ay wanaagsanayd ileyn la is dili maayee waxaan ku soo koobayaa hawraartii Ayeeyo Soomaaliyeed uga run sheegtay “Shugle” oo ahayd “Haddaan Sheyb talada loo deyn, Sheekha duridda laga deyn, Shar qofkeeda laga gubin, Shugle Dumarka laga qaban, Adduun Shey ba’ay ka soo qaad”.